စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု - ပုံထဲက ဘယ်မိသားစုက မိသားစုအစစ်မဟုတ်တာလဲ
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု – ပုံထဲက ဘယ်မိသားစုက မိသားစုအစစ်မဟုတ်တာလဲ
ပုံထဲမှာ မိသားစုသုံးစု သင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်မိသားစုက မိသားစုအစစ်မဟုတ်တာလဲ? သင့်ရဲ့ အဖြေတွေက သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများစွာကို ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။
၁။ No. 1 လို့ သင်ဖြေမယ်ဆိုရင်
သင်ဟာ မိသားစုကို အများဆုံးဦးစားပေးတဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ သင်ဟာ သန်မာအားကောင်းတဲ့ ဖခင်မရှိဘဲကြီးပြင်းကောင်း ကြီးပြင်းလာရပါလိမ့်မယ်။ သင်သတိထားမိတဲ့အချိန်တိုင်း သူက ဂရုစိုက်တဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။ မိခင်ကလည်း သူ့ကိုကလေးတွေနှင့် ဝေးကွာစေတယ်။ သင်က တစ်ခြားလူတွေကို ကူညီချင်တယ်၊ အခြားလူတွေရဲ့ ဘဝမှာ အပြုသဘောပြောင်းလဲချက်တွေအတွက် ကြိုးစားတယ် ။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ စစ်မှန်တဲ့မိသားစုဆိုတာ ဘယ်လိုအရာဆိုတာ သင်နားမလည်ဘူး။
၂။ No .2လို့ သင်ဖြေမယ်ဆိုရင်တော့
သင်က သင့်ရဲ့ မိသားစုအတွက် အမှန်တကယ့်အရေးကြီးတဲ့ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ မိသားစုက သင့်ဘဝအတွက် အမြဲတမ်းဦးစားပေးအရေးကြီးပါတယ်။ ပုံထဲက မိဘတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပိုပြီးအာရုံစိုက်နေကြတယ်။ မိခင်က mini စကတ်အတိုလေးကို ဝတ်ထားပြီးတော့ ဖခင်က သူတို့ကို လျစ်လျူရှုထားတယ်
မိသားစုဝင်အားလုံးအတွက် ခိုင်မာပြီး တည်မြဲတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေ၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေရှိသင့်တယ်လို့ သင်ယုံံကြည်တယ်။
၃။ No.3ကို သင်ရွေးမယ်ဆိုရင်
ဒီပုံမှာ သင်ပျော်ရွှင်ပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မိသားစုရှိတယ်။ မိဘနှစ်ပါးဟာ သူတို့ရဲ့ ကလေးကို ချစ်ခင်ပြီး ဂရုစိုက်တယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ဒီမိသားစုကို အတုအယောင်မိသားစုလို့ ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုမှာ နေထိုင်နေတာကြောင့် စိတ်ကျန်းမာရေးဖျားနာနေမှုအတွက် တစ်ခုခုသင့်ကိုယ်သင်စစ်ဆေးသင့်နေပါပြီ။
သင့်မိဘတစ်ဦးဦးက အရက်သမားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲနေမယ်ဆိုရင် (သို့) စိတ်ရောဂါခံစားနေရမယ်ဆိုရင် သင့်စိတ်က မိသားစုအတုအယောင်အဖြစ် နံပါတ် ၃ မိသားစုကို ရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာ မျှဝေပေးထားတဲ့ ပုံတစ်ပုံက သင်စိတ်ဝင်စားလောက်မယ့် ပဟေဠိလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပုံထဲမှာ ဘယ်သူက ကျူးလွန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဘယ်လိုသဲလွန်စမျိုးကိုမှ ပေးမထားပါဘူး။ အရာအားလုံးဟာ သင်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ အရာနှင့် သင်ရွေးချယ်တဲ့ တရားခံအပေါ် မူတည်ပြီး သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး စိတ်နေစိတ်ထားကို ပြောပြသွားမှာပါ။...
ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ ညဘက်အိပ်ချိန်တွေရောက်လာတဲ့အခါ cb ကို ဖွင့်ဖို့၊ အွန်လိုင်းဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ဖို့၊ IG ကို ဖွင့်ဖို့သာ ကြိုးစားကြပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ Pew တွေ့ရှိချက်အရ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က စာအုပ်တစ်အုပ်မှ...